အားကျမခံ ..စစ်ကိုင်းမြို့မှာလည်း.. Food Box လုပ်လိုက်ပြီ – ရှအေလငျး
မန္တလေးမြို့က အစပြုလိုက်တဲ့ Food Box ဟာ ခုဆိုရင် တခြားမြို့တွေမှာပါ လိုက်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်
ဒါဟာ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ လှူဒါန်းမှု တခုပါ အရင်ကဆို Food Box ဆိုတာ နိုင်ငံခြားမှာပဲရှိတာပါ
ခုလို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတာ ဝမ်းသာစရာပါ
တခြား မြို့များ နည်းတူ စစ်ကိုင်းမြို့က လည်း အားကျမခံ စစ်ကိုင်းမြို့ ကမ်းနားလမ်းမှာFood Box ကိုထားရှိထားပါတယ် ရေ / အချိုရည်ဗူး မုန့် . ကွမ်း ဆေးလိပ်က အစ စုံလင်စွာထားရှိပေးထားပါတယ်
Siberian Bird ( YomaLan )
မန်တလေးမွို့က အစပွုလိုကျတဲ့ Food Box ဟာ ခုဆိုရငျ တခွားမွို့တှမှောပါ လိုကျလုပျနကွေပွီဖွဈပါတယျ
ဒါဟာ အငျမတနျကောငျးတဲ့ လှူဒါနျးမှု တခုပါ အရငျကဆို Food Box ဆိုတာ နိုငျငံခွားမှာပဲရှိတာပါ
ခုလို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ဖွဈလာတာ ဝမျးသာစရာပါ
တခွား မွို့မြား နညျးတူ စဈကိုငျးမွို့က လညျး အားကမြခံ စဈကိုငျးမွို့ ကမျးနားလမျးမှာFood Box ကိုထားရှိထားပါတယျ ရေ / အခြိုရညျဗူး မုနျ့ . ကှမျး ဆေးလိပျက အစ စုံလငျစှာထားရှိပေးထားပါတယျ
ထီပေါက်လျှင် ဆုငွေထုတ်ယူရမည့် အဆင့်များနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ
ဆိုင်ပိတ်တိုင်း အသံတွေကြားနေရလို့ ဆိုင်ရှင်က ရဲခေါ်.၊ ရဲတွေက စစ်ဆင်ရေးပုံစံနဲ့ ဆိုင်ကို ဝိုင်း၊ မီးဖွင့်ပြီးဝုန်းခနဲ ဝင်အစစ်..သူခိုးက ငုတ်တုတ်လေး ပြုံးပြနေတဲ့ ထင်မထားတဲ့အဖြစ်
လူခန်ဓာ ကိုယျတဈဝကျခနျ့ရှိတဲ့ ကွကျတူရှေး တဈကောငျကို တှရှေိ့
တူရကီမှာ …အမျိုးသားတစ်ဦး ….ထီး လေမလွင့်အောင်...
ဇနီးဖြစ်သူမှ..ရင်ဘတ်ပေါ်တက်ခွပြီးကြိုးဖြင့်…လည်ပင်းအား ရစ်ပတ်ကာ လမ်းဖြင့်...
မယ်ဆိုင်ဂူက လူငယ် ၁၃ ဦး ဆီ သွားရာကနေ ကယ်ဆယ်ရေး ရေငုပ်သမားတစ်ဦး သေဆုံး :O 😰